Ziziphi izimonyo zokuthenga kwesikhumba esincinane?
Abesifazane basoloko befuna ukuba bahle! Ngamanye amaxesha bafuna ubuncinci ukufihla imibala embalwa ebonakala ebusweni, eduze kwamehlo. Yaye ukuba iimpumpi? Into ayimnandi. Yintoni endimele ndenze kwiimeko ezinjalo? Thatha imali uze uye kwivenkile. Kodwa indlela yokukhetha oko kukufunayo, zeziphi izimonyo zokuzithengela ulusu lolutsha?
Amehlo aphephe ngqo kwiintlobo zeemithi, izibhobho, iibhotile ... Yintoni ongayikhetha kwesikhumba sakho nendlela yokuchonga uhlobo lolusu?
Isitayela somfazi wesimanje sihle kwaye sihlambulukile kakuhle. Ukujongeka uhlala uhloniphekileyo kwaye umfazi osemtsha kufuneka aqalise ukunyamekela ulusu lwakhe kwintsana. Ukuba ucinga ukuba esemncinci ukwanele ukusebenzisa kuphela isepha kunye ne-cosmetics ayifuniyo, ke lo uluvo oluphosakeleyo.
Ukunyamekelwa kwesikhumba ngexesha elimncinci akudingeki kuphela labo abanesikhumba esikhulayo. Ukunyamekela ngokufanelekileyo kuyadingeka kunaluphi na ulusu. Nangona ufezekile ebusheni bakhe. Ngokuqinisekileyo okokuba umfazi emva kweminyaka engama-30 uza kubonakala ngathi kuxhomekeke njani kwesikhumba sakhe ebusheni bakhe.
Akunandaba nokuba ngabafazi beminyaka yobudala. I-Cosmetics yakhe idlala indima ebalulekileyo ebusheni nasekukhuleni. Kodwa iziqhumiso mazibe zizodwa kwaye zifanelekile kwixesha. Ukuze ufumane umphumo ofunwayo, kubalulekile ukwazi imigaqo yokukhetha izimonyo zesikhumba esincinane.
Kukho imigaqo yezinto zokuzicoca ezithengela ulusu lolutsha:
1. Uneminyaka engakanani onokuqala ukuyisebenzisa?
Apha simele siqwalasele ukuba ubuhle bentombazana encinci kwimvelo yakhe. Izimonyo zokuhlobisa ngelixa kubalulekile ukuhlaziya. Ukuba ufuna ngokwenene ukukhanya, ke oku kukho izixhobo ezizodwa eziveliswa ngabavelisi abaziwayo. Ukukhetha okulungileyo kwabavelisi kunye nokusetyenziswa kakuhle kwezonyango kuya kuba yisiqinisekiso sokugcina ubuhle.
Sebenzisa izimonyo, eziklanyelwe ukunyamekela ulusu kufuneka ziqale ngexesha lokukhulelwa. Iminyaka ukususela ngo-12-14. Kulo thuba amantombazana ahlala eneengxaki zesikhumba. Uninzi ngokuphindaphindiweyo ngexesha lokuya esikhathini, kodwa omnye umntu rhoqo. Ngaloo nto ufanele ucinge malunga nexesha lokuba uthenge iibhubhu kunye neebhotile ukugcina ulusu.
2. Izimonyo kufuneka zibe ngabanye!
Akukho mama, akukho dade. I-Cosmetics kufuneka ikhethwe ngokuchanekileyo kwesikhumba sakho kwaye yenzelwe ukunyamekela isikhumba esincinci - le ngenye yezinto ezisisiseko zeendlela zokukhetha izimonyo ezifanelekileyo zesikhumba esincinci.
Eyona nto ibaluleke kakhulu yintengiso yokucoca. Ezi zi-gels ezihlukeneyo zokuhlamba, isepha yolwelo, okwenza kube lula ukucocekisa isikhumba ngaphandle kokulimaza umgca wokukhawulela.
Insipho evamile, kuquka nesepha yentsana, kule meko ayifanelekanga. Iyakhula kakhulu isikhumba, ikhulisa umsebenzi weengqungquthela ezisisigxina, esele zisebenza ngaphezu kwesiqhelo. Kukho umgaqo: uhlambululi usebenza kancinci, ngaphantsi kunika i-foam. I-alkaline equlethwe kwisepha inonakalisa ulusu.
Isixa esilandelayo siyiconic. I-Tonic ihlambulula ngokucacileyo ulusu, inempembelelo kuyo, isusa ukuvuvukala, iyanciphisa i-pores.
Kwezinye iimeko, i-tonic idibaniswe necocekileyo yesikhumba. Iindlela "2-in-1" zifumaneka. Oku kungasetyenziselwa nje njengendlela "yendlela". Ukusetyenziswa kwansuku zonke kungcono ukuthenga iimveliso ezimbini ezahlukeneyo. Kufuneka ihlawule ingqalelo ukuba i-tonic ekubunjweni kwayo ayinalo utywala okanye i-acetone. Ngokuqinisekileyo, iminyango eyomileyo ayimfuneko, kodwa ngexesha elifanayo lonke ulusu, kunokuba luchukumise ukuguga kwangaphambili.
Ukucoca ngokusisisiphelo kwesikhumba kuncediswa yi-scrub esithambileyo esinceda ukukhupha amaseli ekhumbeni efile phezu kwesikhumba, kunye ne-mask ukuze uhlambulule ulusu kwaye ususe amabala amnyama. Ezi zi yobisi zisebenzelana namaxesha angama-2 ngeveki, ngohlobo lwesikhumba, ukuya kwi-1 kwiiveki ezimbini. Ngoluhlobo lwesikhumba oludibeneyo, imaski yokucoceka ngokujulileyo ingasetyenziselwa phezulu kwisimo sengxaki (ebunzini, impumlo, i-chin).
Ulusu emva kokucoca lufuna uncedo nokukhusela. Kwikhumba elincinci, awudingi ucoceko oluqinileyo okanye oluthile olunomsoco. Uneminyaka engama-25, akudingeki ukuba usebenzise ukhilimu onondla. Kwaye ukusetyenziswa kwekrimu yosuku okanye i-gel iyimfuneko. Ukulungiswa kwemini yesondlo kunika i-hydration efanelekileyo kwesikhumba esincinane, ukhusela ulusu kwilanga, luthintela ukungena kothuli kwindawo enzulu yolusu kunye neebhaktheriya. I-ayisikrimu ye-Day ingasetyenziselwa ukuba, emva kokuhlamba ngokuhlwa, uvakalelo lwe-tightness luvela.
Zonke iimveliso ezisetyenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba, njengomthetho, ziqulethe izinto ezichasayo kunye nezichasayo. Ezi zicatshulwa kwizityalo kunye neoli: i-yarrow, i-aloe, i-calendula, i-chamomile, i-eucalyptus, isihlahla somthi. I-Zinc isetyenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba sengxaki. Iphilisa ukutshaya okukhoyo kunye nokuthintela ukubonakala kwezinto ezintsha. Inemiphumo yokubambisa isindisa isikhumba esinamafutha e-greasy. Ezinye iimveliso zinefarnesol ekubunjweni kwazo. Icandelo le-antibacterial likhoyo kwiimbini kunye ne-gels, kunye neendlela zokulungisa izilwanyana kunye neyeza. Ngokuphindaphindiweyo nakwi-lipstick nemithunzi.
Ngokubhekiselele kwiitoni. Kunconywa ukuba uyisebenzise ukususela kwithuba apho iimpahla zokucoca zaqala ukusetyenziswa. Iityukri zetekisi zenziwe ngesikhumba esincinane. Ngokona nxalenye, ezi zi-gels okanye i-emulsions, zisetyenzisiwe kakhulu kwesikhumba kwaye izibonda azigciniwe. Ungasebenzisa ipensela yokulungisa, ukuwafihla iindawo zengxaki kuphela. Okukhethiweyo kuxhomekeke kuphela kwimeko yesikhumba.
Ukubumba kakuhle akubizi. Kwaye ukuzama ubuncinci bakhe akufanelekanga. ukusetyenziswa kwezonyango eziphantsi kweenkonzo ezincinci kunokukhokelela kwiingxaki ezinzulu emva koko, kunye neendleko ezininzi zokonyango. Ukulandela imigaqo yokukhetha izimonyo zesikhumba esincinci, kufuneka ukhethe umenzi owaziwayo, apho kukho ithemba. Kuya kuza kumama onobuchule kunye nocebisi. Ngokuqinisekileyo uya kukwazi ukuthenga ngokukhawuleza yonke imali efunekayo yokunakekelwa kwesikhumba.
Ukuhlanjululwa kwesikhumba emva kweziselo zokuhlobisa
Ngaba ndifuna ukuvavanya izimonyo kwizilwanyana?
Unokukhetha njani itonic enhle ebusweni?
Ayikho yonke i-salmon inokusetyenziswa ngokulinganayo: Abathengisi beentlanzi bayakhohlisa njani
Iintlobo zephepha lodonga, iteknoloji
U-Ekaterina Klimova waqala ukuxelela ngokungcatsha kwendoda yakhe yangaphambili
Indlela yokukhetha igama elifanelekileyo lomntwana
I-Stew ye zucchini
UJasmine waphendula ngokukhawuleza ekugxeka ubuhlobo bakhe nomyeni wakhe
Iintlobo zeenwele kunye nokunyamekela
Jam kusuka kwi jam